Fika 21 ho an'ny iPad sy iPhone mety tsy fantatrao | Vaovao IPhone
Taona maro lasa izay dia nividy ny iPhone voalohany aho, talohan'ny nampiasako ny sehatra BlackBerry, avy eo nividy ny iPad Mini voalohany aho, izay ampiasain'ny zanako lahy izao; Nandany taona maro aho vao nahalala sy nahita tetika samihafa azonao atao amin'ny fitaovan'ny iOS anao, fika ho an'ny iPad sy iPhone izay mahasamihafa ny sehatra hafa. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao tetika vitsivitsy, izay tsy fantatrao.
1 Mamitaka amin'ny fampiharana samihafa
1.1 Miantso fanitarana finday mandeha ho azy amin'ny iPhone
1.2 Ampiasao Google Maps ho GPS maimaimpoana (Offline)
1.3 Atsaharo ny mpamaky mozika amin'ny famataran'andro
2 Mampiasà torohevitra
2.1 Ny tanjaka famantarana dia aseho amin'ny isa
2.2 Akatony ny bara marobe
2.3 Makà sary sy rakipeo horonan-tsary amin'ny alàlan'ny headphone
2.4 Mamoha indray vava nakatona tao Safari
2.5 Fikarohana Spotlight
2.6 Hamafana ny tarehimarika farany niditra tao amin'ny kajy
2.7 Kajy siantifika
2.8 Fampiasana hafa ho an'ny headphone
2.9 Kitiho eo an-tampony amin'ny tsindry iray
3 Soso-kevitra momba ny toe-javatra
3.1 Fampiasana fidirana
3.2 Fomba fiaramanidina hamenoana haingana ny fitaovana ampiasainao indroa haingana
3.3 Fanampiana bokotra
4 Fetsy fitendry
4.2 Kapitaly maharitra
4.3 Ovao ny kitendry ho maody efijery roa (ankihibe)
4.4 Ahoana ny fomba fanoratana ny mari-pahaizana mari-pahaizana º
4.5 Ahintsano hamongorana izay voasoratra
5 Fetsy fakan-tsary
5.1 Hidy AE / AF
Mamitaka amin'ny fampiharana samihafa
Miantso fanitarana finday mandeha ho azy amin'ny iPhone
Ny fiantsoana fiatoana fiatoana amin'ny iPhone dia mamela anao ampahafantaro ny fitaovanao miato aorian'ny fiantsoanao isa iray ary avy eo miantso nomerao hafa. Ka, andao lazaina hoe miantso namana amin'ny orinasa "X" ianao, 123456 ny nomeraon-telefaon'ilay orinasa ary ny fanitarana ny namanao dia 789. Amin'ity safidy ity dia hiantso ny 123456 aloha ny iPhone, miato kely mandra-pahazo ny valiny antso, ary avy eo dia hiantso ho azy 789. Raha hampiasa an'ity endri-javatra ity dia tsotra tsindrio ary tazomy ny bokotra asterisk "*" aorian'ny ampidiranao ny laharana voalohany, ka haseho ny koma. Ampio izao ny laharana faharoa hiantsoana aorian'ny fiatoana.
Ampiasao Google Maps ho GPS maimaimpoana (Offline)
Mandritra ny fandehanana any ivelany, azonao atao ny mampiasa ny Google Maps ho GPS maimaim-poana, tsy mila drafitra angona iraisam-pirenena. Alohan'ny handehananao ivelan'ny Internet dia asehoy ny faritra izay tsy hanananao Internet, avy eo zahao ny sarintanin'ilay faritra tianao hampiasaina amin'ny fampiharana sarintany, ary soraty ny "ok map" ao anaty boaty fikarohana. Ho hita io angona io na dia tsy mifandray data aza ianao.
Atsaharo ny mpamaky mozika amin'ny famataran'andro
Azonao atao ajanony ny famerenana mozika aorian'ny fotoana voafaritra. Ilaina indrindra izany raha tianao ny matory mihaino mozika, fa tsy te hifoha hampiato ny playback. Tsy maintsy mandeha amin'ny famantaranandro ianao, avy eo misafidy Timer ary ampifanaraho ny faharetany. Safidio ny safidy "Atsaharo ny filalaovana”Ka rehefa tapitra ny famantaranandro dia hijanona ny playback.
Ny tanjaka famantarana dia aseho amin'ny isa
marika * 3001 # 12345 # * ary avy eo tsindrio ny bokotra antso.
Rehefa avy nipaipaika ny bokotra fiantsoana ianao dia hahita ny fitsapana an-tsaha ilay fitaovana. Hanana isa ratsy milaza desibela (dBm) ianao izao fa tsy bara famantarana.
Akatony ny bara marobe
Rehefa manidy ny rindranasa ao amin'ny bara multitasking (aorian'ny fipihana indroa ny bokotra Home) dia azonao atao izany manakatona fampiharana telo miaraka amin'ny fotoana iray. Mila mampiasa rantsantanana telo fotsiny ianao hanidiana ireo rindranasa.
Makà sary sy rakipeo horonan-tsary amin'ny alàlan'ny headphone
Kitiho ny bokotra volume + amin'ny fanaraha-maso lavitra ny findainao mifanaraka amin'ny Apple ao anatin'ny fakantsary fakantsary handefa ny sary na handraisana ny horonantsary, toro-hevitra tena tsara ho anao haka sary mihetsika tsara indrindra.
Mamoha indray vava nakatona tao Safari
Ao amin'ny fitaovanao, rahoviana tazomy ny bokotra + hanokatra kiheba vaovao avy amin'ny Safari, mahazo lisitr'ireo takelaka nikatona vao tsy ela ianao.
Rehefa manoratra amin'ny fikarohana Spotlight ianao dia afaka manokatra sy miditra amin'ny ankamaroan'ny fampahalalana izay voatahiry ao anaty telefaona, ny fifandraisanao (azo karohina amin'ny anarana na ny isa), ny rindranasa, ny hafatra, ny hetsika amin'ny alimanaka, ny hira, ny horonan-tsary ary maro hafa (raha mahita ny zavatra tadiavinao ny olona dia hanao fikarohana ao amin'ilay Internet). Afaka ampanjifaina mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izy io Fikirana> Ankapobeny> Fikarohana Spotlight. Azonao atao ny mampiasa mivantana ny Spotlight Search rehefa mila miantso ianao, mandefa hafatra (fa tsy mankany amin'ny lisitry ny fifandraisana), mahita ny rindranasa tsy hita amin'ireo rindranasa an-jatony, na mitady toerana iray (azonao atao ny mikaroka amin'ny alàlan'ny lohateny, mpanakanto na rakikira), raha tokony hitety ny playlist rehetra.
Hamafana ny tarehimarika farany niditra tao amin'ny kajy
Raha te hamafa ny isa farany nosoratanao tao amin'ny kajy ianao, dia tsotra solafaka ny rantsan-tananao eo amin'ny efijery fanaovana kajy avy eo ankavia miankavanana na ny mifamadika amin'izany.
Ahodino amin'ny alàlan'ny fanaovana kajy an-tserasera ny fitaovanao ary ho lasa kajikajiana siantifika io.
Fampiasana hafa ho an'ny headphone
Miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra ny findainao, azonao fehezina ny mpilalao raha mihaino mozika. Tsindrio ny bokotra Play / Pause amin'ny sofin-tsofinao indray mandeha hijanonana na hilalao, indroa handeha amin'ny hira manaraka, na intelo hamerenana hira iray.
Kitiho eo an-tampony amin'ny tsindry iray
Rehefa mijery lavitra ny pejy ianao, kitiho eo amin'ny bara farany misy fampiharana ary ity dia hamerina anao eo an-tampony avy hatrany.
Soso-kevitra momba ny toe-javatra
Rehefa te-hilalao amin'ny iPhone na iPad anao ny ankizy dia mety mila mampihetsika ny fisehoana amin'ny Guided Access ianao. Ity fampiasa ity dia mitazona ireo rantsan-tànana kely ireo voafetra ihany tsindrio fotsiny amin'ny toerana voatondro ary tsy mivoaka ny fampiharana.
Mandeha Fikirana> Ankapobeny> Fahafahana fidirana> Fandraisana fidiana ary avelao izy, amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manomboka manamboatra azy io.
Fomba fiaramanidina hamenoana haingana ny fitaovana ampiasainao indroa haingana
Raha apetrakao ny telefaona fomba fiaramanidina, ity dia handoa haingana indroa haingana kokoa. Andramo izany rehefa fohy amin'ny fotoana ijananao ianao, mitsitsy fotoana.
Raha manana bokotra Home tapaka ianao na manana olana amin'ny fikasihana ny efijery, alefaso ity safidy ity. Raha vantany vao ampodinao avy amin'ny fanovana fidirana, hahita teboka fotsy lehibe eo amin'ny efijery ianao ahafahanao mampiasa asa samihafa amin'ny fitaovanao.
ny ny hitsin-dalana dia mamela anao hampiasa hitsin-dalana maharitra amin'ny teny sarotra izay soratanao betsaka. Tsy maintsy mankany ianao Fikirana> General> Keyboard> Fanoloana lahatsoratra. Tsara ho an'ity karazana hitsin-dàlana manaraka ity:
Teny sarotra na lava.
Tandindona hafahafa toy ny: ← →, ♥, sns.
Làlana sy toerana izay lazainao matetika ao anaty hafatra na mailaka.
Matetika no diso ny tsipelina teny.
Indraindray dia ilaina ny manoratra andian-teny na fanafohezana amin'ny sora-baventy fotsiny. Ianao dia tokony manao paompy indroa haingana hanovana hidin-trano kapila maharitra.
Ovao ny kitendry ho maody efijery roa (ankihibe)
Amin'ny iPad, azonao atao ny manoratra amin'ny alàlan'ny fampiononana avadiho ny maody fitendry roa (ankihibe) ny kitendry anao. Ny ilainao dia tsotra atsofohy amin'ny rindran-damina ny rantsantanana roa ary hizara roa ny kitendry.
Ahoana ny fomba fanoratana ny mari-pahaizana mari-pahaizana º
Raha misy ifandraisany amin'ny toetrandro na ny simia ny lohahevitra dia mety mila mampiasa ilay mari-pahaizana degree ianao. Tsindrio ary tazomy mandritra ny segondra maromaro ny isa aotra, ary hiseho etsy ambony ny kisary kilasy, avy eo safidio ilay ilainao.
Ahintsano hamongorana izay voasoratra
Rehefa manoratra hafatra amin'ny fitendry ianao dia mety maniry izany amin'ny fotoana sasany esory ny teny rehetra, noho izany dia tsy maintsy ataonao ahintsano ny fitaovana ary tsindrio UndoIo dia hamafana ny hafatra iray manontolo indray mandeha.
Hidy AE / AF
Ny hidy AE / AF no mifantoka sy mihidy hidin-trano amin'ny fakan-tsary iPad na iPhone, ilaina izany rehefa te haka sary misy jiro na halalin'ny toe-javatra sarotra ianao. Miseho ny "AE / AF Lock", rehefa tazonina mandritra ny segondra vitsy ny efijery. Raha te-hanafoana io asa io dia kitiho eo amin'ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Fetsy iPad sy iPhone 21 mety tsy fantatrao momba izany